Bit By Bit - Running fanandramana - 4.4.1 kery
Kery dia manondro ny hoe hatraiza ny vokatry ny fanandramana manohana ny ankapobeny kokoa famaranana.
Tsy misy fanandramana tonga lafatra, ary ny mpikaroka dia namolavola voambolana be dia be mba hamaritana ireo olana mety hitranga. Ny fahamendrehana dia manondro ny habetsaky ny valin'ny fanandramana iray manokana hanohanana ny famintinana ankapobeny. Ny mpahay siansa sosialy dia nahita fa manampy tokoa ny hanaparitaka valim-bidy amin'ny karazana efatra lehibe: ny fanamafisana ny statistika, ny valim- (Shadish, Cook, and Campbell 2001, chap. 2) anatiny, ny fanamafisana ny fahamendrehana, ary ny valim- (Shadish, Cook, and Campbell 2001, chap. 2) ivelany (Shadish, Cook, and Campbell 2001, chap. 2) . Ny fametrahana ireo foto-kevitra ireo dia hanome anao lisitry ny lisitry ny saina mba hanakanana sy hanatsarana ny famolavolana sy ny fanadihadiana ny fanandramana, ary hanampy anao hifandray amin'ireo mpikaroka hafa izany.
Foiben'ny valim - pifidianana ara - toekarena manodidina ny fanadihadiana momba ny fanandramana momba ny fanandramana. Ao amin'ny tontolon'ny Schultz et al. (2007) , ny fanontaniana toy izany dia mety mifantoka raha toa ka manitsy ny valin'ny \_(p\_) valiny marina izy ireo. Ny fitsipika statistika dia mila mamolavola sy manadihady ny fanandramana dia mihoatra lavitra noho ny votoatin'ity boky ity, saingy tsy niova tanteraka tamin'ny vanim-potoana nomerika izy ireo. Ny niova anefa dia ny fanatsarana ny tontolo iainana eo amin'ny fanandramana nomerika vaovao ho an'ny fampiasana fomba fanabeazana masinina mba hanombanana ny heterogeneity ny vokatry ny fitsaboana (Imai and Ratkovic 2013) .
Valam-pidirana ao anaty aterineto manodidina ny fanatanterahana ny fomba fiasa ara-drariny. Miverina amin'ny fanandraman'i Schultz et al. (2007) , ny fanontaniana mikasika ny valim-panaovana anatiny dia mety hahitana ny fihoaram-pefy, ny fikarakarana ny fitsaboana, ary ny fanombanana ny vokatra. Ohatra, mety hiahiahy ianao fa tsy namaky ny metatra elektrika azo antoka ny mpikaroka. Raha ny marina dia niahiahy momba ity olana ity ny Schultz sy ny mpiara-miasa, ary nanana metatra metatra ny famakiana indroa; Soa ihany, ny valiny dia tena mitovy. Amin'ny ankapobeny, ny fanandraman'i Schultz sy ny mpilatsaka an-tsehatra dia toa manana fanamarinana avo lenta, fa tsy izany foana no zava-misy: ny sehatra matotra sy ny fanandramana an-tserasera matetika dia mitarika olana amin'ny fametrahana tsara ny fitsaboana amin'ny vahoaka marina sy ny fandrefesana ny vokatra ho an'ny rehetra. Soa ihany, ny taona dizitaly dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny ahiahiny momba ny valim-pifandraisana anatiny satria mora kokoa izao ny miantoka fa ny fitsaboana dia omena an'ireo izay tokony horaisina sy handrefesana ny vokatra ho an'ny mpandray anjara rehetra.
Manangana toeram-pitsangatsanganana manodidina ny lalao eo anelanelan'ny angon-drakitra sy ny fanorenana teôlôjika. Araka ny resahina ao amin'ny toko faha-2, ny fanorenana dia fijery miavaka izay heverin'ny mpahay siansa sosialy. Indrisy anefa fa tsy manana famaritana mazava sy fandrefesana mazava foana ireo hevitra hafahafa ireo. Miverina any Schultz et al. (2007) , ny filazana fa mety hampidina ny fampiasana herinaratra ny fametrahana fitsipika ara-tsosialy dia mitaky ny mpikaroka hanamboatra fitsaboana izay hamoaka "fepetra ara-tsosialy" (ohatra ny emoticon) ary handrefesana "fampiasana herinaratra". Tao anatin'ireo fanandramana analogy, maro ny mpikaroka no nanao ny fitsaboana azy manokana ary nanatsara ny vokany. Izany fomba izany dia miantoka fa, raha azo atao, dia mifanaraka amin'ny fomban-drazana mifototra amin'ny fanandramana ny fanandramana. Ao anatin'ireo fanandramana nomerika izay ahitana mpikaroka miara-miasa amin'ny orinasa na fitondram-panjakana handefa fitsaboana ary hampiasa ny rafitra momba ny angon-drakitra mandrakariva mba handrefesana ny vokatra, mety tsy dia mafy loatra ny lalao eo amin'ny fanandramana sy ny fanorenana. Noho izany, manantena aho fa ny fananganana ny fahamendrehana dia hiankin-doha bebe kokoa amin'ny fanandramana nomerika kokoa noho ny fanandramana analoga.
Farany, ny toeram-pitsangatsanganana ivelany dia mety ho azo alamina amin'ny vokatra hafa ny vokatr'io fanandramana io. Miverina any Schultz et al. (2007) , afaka manontany raha io hevitra io ihany no ahafahan'ny olona manome vaovao momba ny fampiasana angovo eo amin'ny fifandraisan'izy ireo sy ny mari-pamantarana ara-drariny (ohatra, ny emoticon) - dia hampihena ny fampiasana angovo raha toa ka natao tamin'ny fomba hafa amin'ny toerana hafa. Ho an'ny ankamaroan'ny fanandramana tsara sy tsara tantana, ny olana momba ny fananahana avy any ivelany no sarotra indrindra horesahina. Taloha, ny adihevitra momba ny valim-panafahana avy any ivelany dia matetika tsy misy afa-tsy vondron'olona mipetraka ao amin'ny efitrano iray miezaka mieritreritra izay mety hitranga raha natao tamin'ny fomba hafa, na amin'ny toerana hafa, na amin'ny mpandray anjara samihafa . Soa ihany, ny taona dizitaly dia manome fahafahana ireo mpikaroka hivezivezy ankoatr'ireo tahirin-kevitra tsy misy data ary manombantombana ny fahamendrehana avy any ivelany.
Satria ny vokatry ny Schultz et al. (2007) dia tena nahafinaritra, ny orinasa antsoina hoe Opower dia miara-miasa amin'ny sampan-draharaha any Etazonia mba hampiasa bebe kokoa ny fitsaboana. Miorina amin'ny endrika noforonin'i Schultz et al. (2007) , dia nanangana endriny manokana momba ny angovo avy any an-tokantrano i Opower izay nanana môdely roa lehibe: iray mampiseho ny fampiasana herinaratra ny tokantrano amin'ny mpifanila trano aminy miaraka amina emoticon ary manome torohevitra amin'ny fampihenana ny fampiasana angovo (4.6). Avy eo, raha niara-niasa tamin'ireo mpikaroka, dia nanatontosa fanandramana mifehy tsy tapaka ny mpanara-maso mba hanombanana ny fiantraikan'ireny Home Energy Reports ireny. Na dia natao tamin'ny fomba ara-batana aza ny fitsaboana amin'ny fanandramana amin'ny ankapobeny - amin'ny ankapobeny amin'ny alàlan'ny alàlan'ny mailaka alim-bolo taloha - dia ny vokatra azo avy amin'ny fampiasana fitaovana nomerika ao amin'ny tontolon'ny zavaboary (ohatra metatra metatra). Ankoatr'izay, fa tsy manangona an'io fanazavana io amin'ny mpikaroka fikarohana mitsidika ny trano tsirairay, ny fanandramana nataon'ny Opower dia natao tamin'ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa mpamokatra herinaratra izay ahafahan'ny mpikaroka mahazo ny famakiana herinaratra. Noho izany, ireo fanandramana an-tsekoly ampahany dizitaly ireo dia mihazakazaka amin'ny lanjany lehibe amin'ny vidiny ambany.
Figure 4.6: Ny tatitra momba ny angovo momba ny angovo momba ny angovo dia nanana modely ara-tsosialy sôsialy sy tetikasam-panatanterahana. Allcott (2011) tamin'ny alalana avy amin'ny Allcott (2011) , tarehimarika 1 sy 2.
Tao anatin'ny andrana fanandramana voalohany ahitana fianakaviana 600.000 avy amin'ny tranonkala 10 samihafa, dia Allcott (2011) fa ny fihenan'ny herinaratra ao amin'ny Home Energy dia nampidina ny herin'aratra. Amin'ny teny hafa dia ny vokatra azo avy amin'ny fandalinana bebe kokoa sy ara-jeografika kokoa dia mitovy amin'ny vokatra avy amin'ny Schultz et al. (2007) . Ankoatr'izay, tamin'ny fikarohana taorinan'ny Allcott (2015) valo tapitrisa fanampiny avy amin'ny toerana samihafa 101 dia hita indray ny Allcott (2015) fa ny fihenan'ny herinaratra momba ny angovo momba ny herinaratra dia nampidina ny herin'ny herinaratra foana. Ity karazan'ny fanandramana lehibe kokoa ity dia nanambara koa ny endrika vaovao mahaliana iray izay tsy ho hita ao anatin'ny fanandramana tokana: ny haben'ny vokatra nolavina tamin'ireo fanandramana taty aoriana (tarehimarika 4.7). Allcott (2015) nihevitra fa io fihenana io dia nitranga satria, tamin'ny fotoana, ny fitsaboana dia nampiharina tamin'ny karazana mpandray anjara samihafa. Raha ny tena manokana, ny fampiasam-bola amin'ny mpanjifa mifantoka kokoa amin'ny tontolo iainana dia mety hampihatra kokoa ny fandaharan'asa, ary ny mpanjifany dia mandray kokoa ny fitsaboana. Satria ny fampiasam-bola amin'ny mpanjifa tsy dia mifantoka loatra amin'ny tontolo iainana no nanapa-kevitra ny fandaharan'asa, dia nihena ny fahombiazany. Araka izany, toy ny randomization amin'ny fanandramana miantoka ny fitovian'ny tarika fitsaboana sy ny fifehezana, ny fomban-tany ao amin'ny fikarohana fikarohana dia manome antoka fa azo atao ny manombatombana ireo tombana azo avy amin'ny vondron'olona mpandray anjara ho an'ny vahoaka marobe (mihevitra ny toko 3 momba ny famafazana). Raha toa ka tsy nalaina an-tsakany sy an-davany ny toeram-pikarohana, dia mety hiteraka olana ny fanatontosana-na dia avy amin'ny fanandramana sy tsiambaratelo aza.
Sary 4.7: Ny vokatry ny fanandramana 111 dia manamarina ny fiantraikan'ny tatitra momba ny angovo momba ny angovo momba ny herinaratra. Tany amin'ny toerana izay nanaovana ny fandaharam-potoana tatỳ aoriana, dia nihena ny vokany. Allcott (2015) manamafy fa loharanom-pamokarana iray misy io lamina io fa ny tranonkala misy mpanjifa mifantoka kokoa amin'ny tontolo iainana dia mety hampihatra kokoa ny fandaharana. Nampifanarahina tamin'ny Allcott (2015) , faha-3.
Miaraka amin'ireo zava-manandramana 111 ireo-10 ao Allcott (2011) sy 101 ao Allcott (2015) fianakaviana 8,5 tapitrisa avy any Etazonia. Mampiseho tsy an-kijanona izy ireo fa ny fampiasana herinaratra momba ny angovo ao an-tokantrano dia mampihena ny fampiasana angovo herinaratra, vokatra iray izay manohana ny fikarohana tany Schultz sy ireo mpiara-miasa amin'ny trano 300 any California. Ankoatra ny fanavaozana ireo vokatra tany am-piandohana ihany, ny fanandramana manaraka dia mampiseho koa fa ny haben'ny vokatra dia miovaova amin'ny toerana. Ity karazan'ny fanandramana ity dia maneho ihany koa ny teboka roa ankapobeny momba ny fanandramana momba ny sehatra dizitaly. Voalohany aloha, ireo mpikaroka dia afaka mametraka am-pihetseham-po ny ahiahiny momba ny valim-panafahana avy any ivelany raha toa ka ambany ny vidin'ny fanandramana fanandramana, ary mety hitranga izany raha toa ka efa mandrefy ny rafitra angon-drakitra hatrany ny vokatra. Noho izany dia manolo-kevitra fa ny mpikaroka dia tokony ho eo amin'ny fitadiavana ireo fitondrantena hafa mahaliana sy manan-danja izay efa voarakitra an-tsoratra, ary avy eo manamboatra fanandramana eo an-tampon'io fotodrafitrasa efa misy io. Faharoa, ity fanandramana fanandramana ity dia mampahatsiahy antsika fa ny fanandramana momba ny sehatra dizitaly dia tsy anaty aterineto; Mihamitombo hatrany izany, manantena aho fa hatraiza hatraiza izy ireo dia hahita vokatra marobe araka ny fahita any amin'ny tontolo manodidina.
Ny karazana valim-panafarana efatra manan-kery, ny valim-pifanarahana anatiny, ny fanamafisana ny fahamendrehana, ary ny valim-panafahana avy any ivelany dia manome lisitry ny lisitra ara-tsaina mba hanampiana ireo mpikaroka hanadihady raha toa ka manatsara kokoa ny famaranana ny valin'ny fanandramana manokana. Raha oharina amin'ny fanandramana an-taonany, ao anatin'ny fanandramana nomerika dizitaly, tokony ho mora kokoa ny mamaly ny fananahana avy any ivelany, ary tokony ho mora kokoa koa ny miantoka ny fahazoana anaty. Etsy andaniny, ny olana momba ny fananganana dia mety ho sarotra kokoa amin'ny fanandramana nomerika dizitaly, indrindra fa ny fanandramana nomerika fahitalavitra izay mifandray amin'ny orinasa.